Indawo evalekileyo kwiloft 1 - I-Airbnb
Indawo evalekileyo kwiloft 1
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguZdeňka
Indawo yokungena kwindlu yosapho isetyenziswa nangabanye abantu,kodwa indawo yokuhlala elandelayo ikumgangatho ohlukileyo we-2. apho kukho igumbi elahlukileyo elinegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhitshi elinendawo yokungena ukusuka kummandla. Ukuqhagamshelana nondwendwe ngokwexesha elinokusetyenziswa kunye neemfuno, ukunxibelelana ngefowuni yinto ebalulekileyo.
Iziko lezembali laseDolný Kubín likumgama weekhilomitha eziyi-2, ukusondela kwezothutho ngebhasi nangetreyini - isikhululo simalunga nemizuzu eyi-10., ngeempelaveki izithuthi zesixeko zisebenza ngeyure de kube ngo-18.00., inkonzo yeeteksi imini nobusuku.
Inxalenye yethu yedolophu ithule, xa sibona kakuhle iChoč, singaphantsi kweKubínská ho Impera/ 6 km/- kunye namathambeka - siya kunceda abantu abashushuluza ekhephini, abakhenkethi kunye nabantu abakhetha amakhowa abazukuphoxeka.
I-Orava yikona entle kumantla weSlovakia, akukho ngxaki ngezinto ezenziwayo unyaka wonke: skis - singaphantsi kweKubinska ho Impera - imithambeko -/ 6 km kude_, iindlela zokuhamba ngebhayisekile, ukunyuka intaba, izikhumbuzo...
Umbuki zindwendwe ngu- Zdeňka
Akukho ngxaki ,siza kwenza isivumelwano . Ukufika ngeempela-veki kunokuba bhetyebhetye - siza kuyilungisa, xa kukho imfuneko engxamisekileyo kunokwenzeka uyilungiselele naphakathi evekini
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dolný Kubín